Fitaovana fanosotra vahaolana kardinaly mangatsiaka avo lenta ho an'ny orinasa sy mpanamboatra tokana | Sanxin
Izy io dia misy fitaovana thermostatic, ampahany fitehirizana rano ary paompy paompy manana fatrany prefilling 1000ml.
Ity vokatra ity dia mety amin'ny maodely samihafa, azo ampiasaina amin'ny fomba samihafa amin'ny tahan'ny perfusion.
Izy io dia manana ny mampiavaka ny fampiasana malefaka, ny fiasan'ny maripana miovaova, ny ranon-tsiranoka tsy misy sisa tavela, ny tsindry kely miditra ary ny outlet
Fitaovana fampidiran-tsiranoka miaro ny myocardial
Ny fo no taova mavitrika indrindra amin'ny fivezivezena mekanika amin'ny vatan'olombelona, ​​miaraka amin'ny enta-mavesatra mavesatra sy fanjifana oksizenina lehibe, izay manome hery hivezivezy ra systetika ary tsy azo sakanana vetivety.
Ny fitaovana dia azo ampiasaina amin'ny fisamborana kardiopulmonary sy ny fanatsarana ny ischemia miokardial ary ny hypoxia rehefa miorina amin'ny fandidiana fo misokatra ny fivezivezy ivelan'ny ra.
Famaritana sy maodely:
Fitehirizana ra faran'izay betsaka 1000 ml 200ml 200ml
Fitehirizana rano ranomandry 1800 ml ≥ 2000 ml ≥ 2000 ml
Savaivony Output 1/4 (ϕ 6.4) 1/8 (ϕ 3.2) 1/8 (ϕ 3.2)
Dama savaivony ϕ 26, 6% mpampifandray anaty luer / /
Savaivony fandrefesana ny mari-pana Fizarana 7 / /
Savaivony manampy gilasy 115 mm ≥ 250 mm ≥ 250 mm
Jiangxi Sanxin Medtec Co., Ltd dia orinasa matihanina amin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana, ny famokarana ary ny varotra. Vokatry ny andiam-pandidiana kardiothoracique ao anatin'izany (ny sivana mikraoba ra, sivana fitoeran-drà sy sivana, fitaovana fampiasa amin'ny rongony mangatsiaka Cardioplegic, fitaovana fantsona fantsom-panafody Extracorporeal azo ampiasaina). Ny kalitaon'ny vokatray dia anisan'ny tsara indrindra amin'ny indostrian'ny fitsaboana, ary manana laza tsara eo amin'ireo mpanjifanay izahay.
Ny orinasanay dia manana forses ara-teknika matanjaka sy fitaovana fanandramana mandroso. Ny orinasanay dia zavamaniry tsara indrindra hamokarana vokatra andianà fandidiana cardiothoracic any amin'ny tanibe Sina.
Teo aloha: Respirator KN95
Manaraka: Catheter tsindry tsara an'ny karazana fiarovana IV
Fantsom-pandehanana ivelan'ny extracorporeal azo ampiasaina ...